I-RawTherapee 5.8 iza nokuxhaswa kwe-RAW ngefomethi ye-CR3 nokuningi | Kusuka kuLinux
Emasontweni ambalwa edlule kukhishwe inguqulo entsha yeRawTherapee 5.8, inguqulo leyo iza nezindaba ezincane, kepha enye yazo ibhekwa njengebaluleke kakhulu kuhlelo lokusebenza ngoba iRawTherapee 5.8 ifaka ukusekelwa kokuqala kwezithombe ze-RAW ngefomethi ye-CR3 esetshenziswe kumakhamera weCanon, kanye nolunye ushintsho olwengeziwe.
Okwalabo abangazi ngeRawTherapee kufanele bazi ukuthi lolu uhlelo lokusebenza ukuthi inikeza isethi yamathuluzi ukulungisa ukukhiqizwa kabusha kombala, lungisa ibhalansi emhlophe, ukukhanya nokuqhathanisa, kanye nokwenza ngcono okuzenzakalelayo kwesithombe nemisebenzi yokunciphisa umsindo.
1 Mayelana neRawTherapee
2 Yini okusha kuRawTherapee 5.8?
3 Ungayifaka kanjani inguqulo entsha yeRawTherapee 5.8 kuLiux?
I-RawTherapee kugqame ukukwazi ukuthola ukwesekwa ukuze ukwazi ukuxhasa inani elikhulu lamafomethi wefayela le-RAW, kufaka phakathi amakhamera anezinzwa ze-Foveon ne-X-Trans, futhi angasebenza nezinga elijwayelekile le-Adobe DNG nangamafomethi we-JPEG, PNG ne-TIFF (kufika kuma-bits angama-32 esiteshini ngasinye).
Futhi uhlelo lokusebenza isebenzisa ama-algorithms ahlukahlukene ukwenza ikhwalithi yesithombe ijwayele, lungisa ukukhanyisa, susa umsindo, uthuthukise imininingwane, ulwe nezithunzi ezingadingekile, imiphetho nemibono elungile, susa ngokuzenzakalela amaphikseli aphukile futhi ushintshe ukuvezwa, wandise ubukhali, ususe imihuzuko kanye nemikhondo yothuli.
I-RawTherapee kusekelwe emcabangweni wokuhlela okungonakalisi, ngokufana nezinye izinhlelo zokucubungula i-RAW.
Ukulungiswa kwangempela kusithombe kusetshenziswa ngesikhathi senqubo yokuthumela ngaphandle. I-RawTherapee ingasebenza namafayela we-RAW avela kumakhamera edijithali, nangezithombe ngefomethi ejwayelekile. Ikhodi yephrojekthi ibhalwe ku-C ++ kusetshenziswa i-GTK + futhi isatshalaliswa ngaphansi kwelayisense le-GPLv3.
Yini okusha kuRawTherapee 5.8?
Kule nguqulo entsha ukufakwa kwethuluzi elisha «Capture Shining» kuyabonakala, que Buyisela ngokuzenzakalela imininingwane elahlekelwe ukufiphala kwelensi (umehluko). Thwebula Ukucija ngokuhlangana ne-Post-Resize Sharpening ivumela imiphumela enemininingwane nebukhali.
Enye into entsha evelele kule nguqulo entsha yi- ukufakwa kokusekelwa kokuqala kwezithombe ze-RAW kufomethi ye-CR3 esetshenziswe kumakhamera we-Canon. Kuze kube manje, kungenzeka ukukhipha izithombe kumafayela e-CR3, futhi imethadatha ayikasekelwa, kepha kulindeleke ukuthi izinhlobo zakamuva zizosithuthukisa lesi sici kuhlelo lokusebenza.
Futhi ukuxhaswa okuthuthukisiwe kwamamodeli ahlukahlukene wekhamera kuyagqanyiswa, kufaka phakathi amakhamera anamaphrofayli ombala we-DCP anemithombo emibili yokukhanya namazinga amhlophe, ngaphezu kokusebenza kahle kwamathuluzi ahlukahlukene.
Ekugcineni kushiwo ukuthi manje kule nguqulo entsha isixhumanisi esine-libtcmalloc.so esiza namathuluzi we-Google ukuxazulula izinkinga lapho i-glibc ingeke ibuyisele imemori kuhlelo lokusebenza.
Ungayifaka kanjani inguqulo entsha yeRawTherapee 5.8 kuLiux?
Okwalabo abanentshisekelo yokukwazi ukuthola le nguqulo entsha yeRawTherapee 5.8 ungathola le nguqulo entsha ngokuvakashela iwebhusayithi yabo esemthethweni lapho ungathola khona izifaki ezihlukile zohlelo lokusebenza (iWindows, iMac neLinux).
Ngakho-ke ngecala lethu le "Linux" Singathola le nguqulo entsha ngokulanda i-AppImage yayo.
Lokhu kungenziwa ngokuvula i-terminal futhi kuyo kwenziwe umyalo olandelayo:
Senze ukulanda manje kufanele sikunikeze izimvume zokwenza nge:
Futhi bangaqhuba uhlelo lokusebenza ngokuchofoza kabili kufayela noma kusuka ku-terminal nge:
Okwalabo abasebenzisi be-Ubuntu kanye nokuphuma kokunye, bangakhetha ukufaka indawo yokugcina ohlelweni lwabo futhi lapho bengazukuthola kuphela inguqulo yakamuva eshicilelwe kepha bazobazisa nangezibuyekezo ezintsha.
Ukufaka i-repository, vele uvule i-terminal futhi kuyo kufanele uthayiphe umyalo olandelayo:
Ekugcineni, bafaka kuphela uhlelo lokusebenza ngokwenza umyalo olandelayo:
Ngokuqondene nalabo abangabasebenzisi be-Arch Linux, I-Manjaro, Arco noma yikuphi okunye ukusatshalaliswa okususelwa ku-Arch Linux, ukufakwa kwalolu hlelo lokusebenza kungenziwa ngokuthayipha umyalo olandelayo:
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-RawTherapee 5.8 ifika ngokuxhaswa kwe-RAW ngefomethi ye-CR3 nokuningi
I-eXtern OS: I-Distro Yokuthola Ikusasa le-GNU / Linux